सहकारीका नाममा नक्कली फेसबुक चलाउने को ? - सहकारीखबर
सहकारीका नाममा नक्कली फेसबुक चलाउने को ?
१ असार २०७१, आईतवार
काठमाडाै । फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालहरुले मानिसलाई जति सहज अनुभूति दिएको छ, त्यतिनै दुःख, असहजता र समस्यामा पार्ने गरेको छ । फेसबुकबाट नै कतिले बर्षौ सम्म नभेटेका मिल्ने साथी सँगको सम्बन्धलाई नजिक बनाउन सजिलो भएको छ त कसैलाई नयाँ नयाँ साथी बनाउन ।
यस्तै सहकारी क्षेत्रमा लागेका सहकारी आन्दोलनका अभियानताहरुका लागि पनि फेसबुक सुचनाको दरिलो माध्यम बन्दै गएको छ ।पछिल्लोसमय फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालको सहि प्रयोगले कसैको उद्दार गर्नसकिने, मनका कुराहरु साथीहरुमाझ राख्न सहजहुने जस्ता काममा टेवा पुर्याएको छभने वर्षौसम्म छुट्टिएर रहनु परेका साथीहरु र परिवारजनलाई नजिक बनाइदिएको छ।
त्यस्तैपछिल्लो समय नेपालमा मौलाएको अनलाईन पत्रकारितालाई फेसबुक र ट्वीटरलगायतका सामाजिक संजालहरुले निकै ठूलो सहयोग गरेको छ । सामाजिक संजालकोमाध्यमबाट विश्वभर फैलिएका मानिसहरुले समाचार तथा जानकारीहरु प्राप्त गर्नसकेका छन् । अनलाईन पत्रकारिताको एउटा पाटो बनेको छ सामाजिक संजाल ।
सामाजिकसंजालको प्रयोगसँगै प्रयोगकर्ताहरुले यसको दुरुपयोग गर्न थालेका छन् ।निशुल्क प्रयोग गर्न पाइने भएको कारण यसको लोकप्रियता जति बढ्दो छ त्यतिनैमात्रामा दुरुपयोग पनि । सहकारीनाम जोडेर खोलिएका केही फेसबुक पेजमा सहकारी संस्थामा सुरक्षित ऋण लगानिकालागि ऋण सदस्य खोजिदिने भन्दै विज्ञापन गर्न थालेका छन् ।
सहकारीका नाममा फेसबुक कसले चलाउँछ यो रहस्यको विषय नै बनेको छ । अहिले सहकारीका सुचना गतिविधी दिने र सल्लाह दिने नाममा सहकारी खबर संगालो,सहकारी सुचना, सहकारी मैत्री सेवा, जय सहकारी लगायताका फेसबुक एकाउन्ट सञ्चालनमा छन् ।
सहकारी सुचना र सेवा दिने नाममा नक्कली एकाउण्ट बनाएर फेसबुक चलाउनेहरु कतिपए त सहकारी सञ्चाकहरु नै रहेको अनुमान गरिन्छ तर पनि सत्य के हो त्यो बाहिर आउन सकेको छैन । यसरीसहकारीको नाममा चलाइएको फेसबुक पेजहरुमा हजारौंसाथीहरु छन् । ति मध्ये सहकारीकमर्मीहरुको संख्या अधिक छ । सहकारीका नक्कलीफेसबुकको प्रयोगको विषयमा कुनै उजुरी अएको छैन , संलग्न देखिए कारबाही हुन्छ प्रहरी प्रधानकार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्र.उ. पिताम्बर अधिकारीले भने । बैक तथा बित्तिय संस्थाकाहरुकामा निगरानि गरेको तर सहकारीका अहिले सम्म त्यसता घटनाको उजुरी नआएको प्रहरीको भनाई छ । फेक आइडी बनाएर चलाउनेहरुलाई साइबर ल अनुसार खोजी गरेर कारवाहीहुने अधिकारीको भनाइ छ ।
लौ हेर्नुस ठगीको नयाँ तरिका , सहकारीको निक्षेप सुरक्षित ऋण लगानी गर्न ऋणी सदस्य खोजिदिने !